Sina Masinina haingam-pandeha cnc machining vita amin'ny alimina vita amin'ny metaly vy sy orinasa mpanamboatra | Weldo
Ny masinina vita amin'ny cnc milina vita amin'ny metaly
Aluminium dia metaly maivana, tsy andriamby, miloko volafotsy izay azo foronina amin'ny endrika rehetra. Azo ahodina anaty takelaka matevina ho an'ny fiara mifono vy na foil manify ho an'ny fonosana. Azo sintomina anaty tariby koa izy io ary atao anaty kapoaka.
Sombiny aluminium aluminium, faritra hafa amin'ny aliminioma
Namboarina matetika ny fitaovana
Aluminium 5083, sns
Zinc / nikela / chrome plating, mafana nandrisika, mandoko,
fonosana vovoka, Anodize oxidation, na misy loko: toy ny volafotsy, manga, mena, sns.
Cnc Machining, cnc fihodina, gringding, fandavahana, W / C…
Ny habe farany ambony dia azo zahana
3: Masinina (ivon'ny milina cnc, latina cnc, fikosoham-bary, fihodinana, fikosehana, W / C, fitrandrahana, fikitihana…)
5: Famitana farany
Fanaraha-maso 100% alohan'ny fandefasana ny santionany, ny fizahana santionany ho takian'ny mpanjifa amin'ny famokarana betsaka.
Ny fonosana mahazatra anay: vokatra nofonosina amin'ny bubble, na anaty kitapo 1 / PP, avy eo anaty boaty hazo na sary miaina. Ary ny ankamaroan'ny entana dia nalefan'ny International Airway Express, DHL, fandefasana. Matetika dia manodidina ny 7-10 andro fiasana (serivisy isam-baravarana) no azonay atao.
Raha nahazo ampahany tsy mendrika ianao dia asehoy anay ny sary, aorian'ny fizahana ny injenieranay sy ny departemantan'ny QC, dia hifidy ny hanampy anao izahay hanamboatra na hamerina ao anatin'ny 10 ~ 15 andro arakaraka ny habetsahan'ny nolavina.
Misy safidy 5 handoavana ny baiko: Paypal, Western Union, T / T, Bank transfer (toy ny OCBC). Safidio amin-katsaram-panahy izay mety indrindra aminao handamina izany.
Fametraham-bola 50%, ary fandoavam-bola alohan'ny fandefasana.
1:Factory mivantana, miaraka amin'ny kalitao sy ny vidiny mirary.
2: ho an'ny fanodinana: Manana traikefa manan-karena amin'ny fanodinana karazana milina isan-karazany amin'ny karazana fitaovana maro izahay.
Tongasoa tanteraka ireo faritra tsy misy fenitra, fenitra, OEM, namboarina.
Ny ampahany dia mety amin'ny alàlan'ny fametrahana avo lenta, ny fandeferana dia mety hahatratra +0,005mm, mety ho tonga amin'ny Ra0.8-3.2 ny fahasarotana
3: Ho an'ny fanangonana: Manana departemanta matihanina mivondrona izahay, satria ny orinasan-tsika koa dia manao fitaovana, afaka manome serivisy fanangonana ho anao.
manome ihany koa vahaolana tokana ho an'ny mpanjifanay izahay. Raha manana olana ianao dia afaka mifandray aminay, hiezaka mafy izahay hanampy anao. Raha manana sosokevitra sarobidy ianao dia hodinihinay tsara izany. Ary tsy hasehontsika ny olon-kafa ny sarin'ny sary nataonao, ary afaka mitaraina izahay NDA.
Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mifandray aminay!
Previous: Steel vy Part
Manaraka: Famolavolana metaly fanodinana fantsom-pamokarana cnc fanamboarana
Ny fiasan'ny mpiasa amin'ny serivisy dia tena tso-po ary ny valiny dia ara-potoana ary tena misy antsipiriany, ity dia tena manampy amin'ny fifanarahana, misaotra.
Avy amin'i Honorio avy any Hongkong - 2017.11.01 17:04
Nosoratan'i Octavia avy amin'ny Danoa - 2018.11.06 10:04
Metal machining foibe faritra fikosoham-bary faritra cnc ...
Fitaovana vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina vita amin'ny alimina aluminium ...
Namboarina vita amin'ny milina CNC / Machined Aluminium Par ...
Famaritana avo lenta vita amin'ny milina CNC / Machin ...
Sombiny aluminium Aluminium / kojakoja matevina aluminium / aluminu ...